what, when, why: फ्री लाईभ अन्लाईन टि.भी हेर्नुहोस्
फ्री लाईभ अन्लाईन टि.भी हेर्नुहोस्
विश्वभरी प्रसारित टि.भी च्यानल फ्रीमा हेर्न चाहनु हुन्छ ? अबस्य पनि चाहनु हुन्छ नै होला । त्यसो भए यस्तो एउटा साईटको बारे जानकारी दिन गईरहिको छु जुन साईट बाट विश्व भरीका ८४ देशहरुको लगभग 1472 भन्दा बढी टि.भी च्यानल लाईभ फ्रीमा हेर्न मिल्छ । सजिलोको लागि तपाईंले यसमा टि.भी च्यानल छान्न कुन भाषाको वा कुन देशको select गर्न सक्नु हुन्छ । तर दु:खको कुरा यसमा हाम्रो नेपाली च्यानल भने राखिएको छैन । आशा गरौ चाडै नै यसमा नेपाली च्यानल पनि add हुनेछ ।
टि.भी च्यानल हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
नमस्ते हजुर म आज येस्तो खुसि छु किनभने येस्तो नै website को खोजि मा थिय!!!!!! यो website आज मात्र थापाए यो website एकदमै
राम्रो रहेछ!!!!!!!!! I LOVE THIS WEBSITE
THANK U N यो WEBSITE बनाउने सदसय लाई धेरै नै मन बाट THANKU THANKU OK BYE